Administrateurs civils eto Mahajanga: Tsy mipetrapetra-potsiny izahay | Région Boeny
Nanantanteraka ny lanonana fifampiarahabana noho ny taona vaovao ny Fikambanan’ny Administrateur civil eto amin’ny Faritanin’i Mahajanga ny Talata 10 Martsa 2015 tao amin’ny Lapan’ny Faritra Boeny, Mahajanga Be.
“Olona notezaina tamin’ny asa ka tsy afaka mipetrapetraka fotsiny ny Administrateur civil fa mandray anjara amin’ny fampiodinana ny asam-panjakana.” Io no fampatsiahivana nataon’Atoa Razafitsalama Gabriel, Filohan’ny Fikambanana aty amin’ny Faritanin’i Mahajanga.
Anisan’ny imasoan’ireo Administrateurs civils monina sy miasa aty amin’ny Faritra Boeny ny mivondrona ao anatin’ny Fikambanana sy ny fandraisana anjara amin’ny lafiny sosialy indrindra tamin’ny teleton ho fanampiana ireo Kere tany atsimo sy ny voina nahazo ny Malagasy tamin’ny fandalovan’ny rivo-doza Chedza.
Marihina fa izao hetsika izao dia fanaon’izy ireo isan-taona ho mariky ny firaisan-kina sy fifankatiavana. Fotoana ihany koa hanaovan’izy ireo dinidinika hitsinjovana ny ho avin’ireo taranak’izy ireo raha ny fanazavana nomen’ny Filohan’ny Fikambanana hatrany. Tsy mendrika hoy izy raha tsy zarizary na mikoroso fahana ny taranak’izany aao Mpaiasam-panjakana ambony.
Nisy ny fanolorana solo-body akoho sy fanapahana mofo mamy niarahan’izy ireo nifaly.